*INTSHA* Indlu entle entliziyweni yeDolophu endala - I-Airbnb
*INTSHA* Indlu entle entliziyweni yeDolophu endala
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguCharlotte
Unexhala malunga ne-Covid kodwa awukwazi ukulinda ukuba ufike elunxwemeni?
Ungajongi ngokubhekele phaya. Indlu yethu encinci kumbindi we-Estepona yeyona ndawo ifanelekileyo kuwe!
Indlu yethu yeyabucala ayinazo iindawo ekwabelwana ngazo.
Sicoca kwaye sibulala iintsholongwane kwindawo phakathi kondwendwe ngalunye.
Siyathemba ukuba ungakhululeka usazi ukuba ikhaya lakho kwiintsuku ezimbalwa ezizayo liya kukhuseleka kwaye licoceke kangangoko!
Ipropathi ekhaphukhaphu kunye nenomoya isandula ukulungiswa yakumgangatho ophezulu, ifakelwe ikhitshi elitsha kraca kunye negumbi lokuhlambela elineshawari yokuhamba yodidi. Njengezindlu zesiNtu zaseSpain, iindonga zingqindilili ngokumangalisayo, zigcina indawo ipholile ehlotyeni kwaye ishushu ebusika. Siphinde songeze abalandeli besilingi kuwo omabini amagumbi ukuthuthuzela, ukongeza kwiyunithi ephathekayo yomoya-moya.
I-casa yonke ikwinqanaba elinye kunye nenyathelo elincinci kwipropathi kunye nelinye kwigumbi lokulala. Ibandakanya ikhitshi yesicwangciso esivulekileyo, indawo yokuphumla kunye nendawo yokutyela, igumbi lokulala kunye negumbi lokuhlambela.
Ikhitshi lifakwe ubungakanani obugcweleyo befriji-ifriji, i-oveni, isitovu sokungeniswa kabini, iketile, umenzi wekofu, itoaster, imicrowave kunye neblender.
Kukho ibhedi elingana nokumkani kunye nesofa etofotofo kwindawo yokuphumla. Nangona indawo yethu inokuthatha abantu abane, asinakucebisa oku ixesha elide.
I-fiber optic wifi ekhawulezayo kakhulu.
Ngalo lonke ixesha lokuhlala kwakho, uya kuba nayo yonke ipropathi ukuba uyonwabele, uzenzele ikhaya kwaye ulahleke uzulazula kwigadi yaseCosta del Sol!
Xa uhleli ngaphandle phantsi kwemithi yee-orenji kwisitalato esiqhelekileyo sabahambi ngeenyawo esineengqayi zeentyatyambo ezimibalabala, unokulibala ngokulula ukuba ukuhambo lomzuzu omnye kuyo yonke into onokuyidinga; ulwandle, i-paseo, imivalo, iindawo zokutyela, iivenkile, indawo yokupaka, abalungisi beenwele, abadayisi, ababhaki, abathengisi beentlanzi. Uluhlu luyaqhubeka!
Isitrato sesinye sezona zifotwe kakhulu e-Estepona kwaye ipropathi ilele emazantsi amanqanaba akhokelela kwiCawe yethu yeLady Los Remedios kunye ne-Estepona's iconic bell tower- eyona ndawo ibalaseleyo yesalathiso ukuba uzifumana ulahlekile xa uzulazula kwizitrato ezintle! Inqaba yentsimbi inokujongwa phantse nayiphi na indawo edolophini!
Sibonelela ngefolda eneendawo ezininzi zokutyela ezicetyiswayo, iibha kunye nezinto ekufuneka zenziwe! Kodwa musa ukuthatha nje ilizwi lethu ngayo! Kuninzi onokuthi uphonononge!
Silapha e-Estepona kwaye sikhululekile kuzo naziphi na iingcebiso kwaye siyavuya ukukunceda ukuba ufuna naluphi na uncedo!
Inombolo yomthetho: H29491AAVLA